Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr Xasan Shiikh Maxamuud oo loo dhaariyey madaxtinimada dalka Soomaaliya - iftineducation.com
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr Xasan Shiikh Maxamuud
iftineducation.com – Madaxweynaha cusub ee Jamhuriyada Federalka Soomaaliya Dr Xasan Shiikh Maxamuud ayaa loo dhaariyay madaxtinimada dalka Soomaaliya afarta sano ee soo socota.
Dr Xasan Shiikh Maxamuud ayaa qudbad gaaban oo uu jeediyay waxa uu u mahadceliyey guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka inta dooratay iyo inta aan dooran.
Waxana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka ay muujiyeen adkeysi iyo niyad wanaag waqtigii ay socotay doorashada, sidoo kale waxa uu mahad weyn u jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed isagoo tilmaamay in waqti adag uu soo maamulay dalka isla markaana uu soo gaarsiiyey heerka uu haatan joogo dalka, isla markaana ay taariiqda xusi doonto howlaha muhiimka ahaa ee uu dalka u soo qabtay.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa waxa uu mahad u celiyey beesha caalamka kaalmada ay mar walba la garab taagan yihiin dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan isla markaana bog cusub uu u furmay ummada kaasi oo horumar gaarsiin karo dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr Xasan Shiikh Maxamuud ayaa guud ahaan ammaankiisa waxaa la wareegay ciidamada amniga oo isugu jira kuwa Nabad sugida booliska iyo ciidamada AMISOM. Waxaana laga yaabaa in uu Dr Xasan Shiikh uu caawaba u hoydo madaxtoyda dalka Soomaaliya Villa Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed Dr Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in dhowaan la shaacin doono xilliga ay dhici doonto xaflada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyada Federalka Soomaaliyeed.